ဘဝမှတ်တိုင်: Samsung Galaxy S3 GT-I9305 v4.3 ကို Root လုပ်ခြင်း,မြန်မာစာထည့်သွင်းခြင်း (How To Root Galaxy S3 GT-I9305 Android 4.3)
Samsung Galaxy S3 GT-I9305 v4.3 ကို Root လုပ်ခြင်း,မြန်မာစာထည့်သွင်းခြင်း (How To Root Galaxy S3 GT-I9305 Android 4.3)
Aung: ကျွန်တော့ဖုန်း S3 Version 4.3 တင်လိုက်တာ မြန်မာစာဖတ်မရတော့လို့ နည်းလမ်းလေးရှိရင်ကူညီပါ...
လောလောဆယ် စမ်းစရာ မရှိသေးလို့ မူရင်းအတိုင်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...အောက်ပါ နည်းလမ်းအတိုင်း လိုအပ်တာလေးတွေ ဒေါင်းယူပြီး Root လုပ်လိုက်ပါ ....။။
1. You already have USB Driver Installed for Galaxy S3 GT-I9305 in your PC. [Download USB Drivers] (အရင်ဆုံး Driver မရှိသေးရင် ဒေါင်းယူ Install လုပ်ပါ)
2. Make sure USB Debugging is enabled otherwise you won’t able to transfer file between PC and Galaxy S3 GT-I9305. (Phone Setting ကတဆင့် USB Debugging ကို Enable လုပ်ပေးထားပါ) (ဖုန်းထဲမှ အရေးကြီးတဲ့ Data ရှိရင် Backup လုပ်ထားပါ)
How To Root I9305XXUEMKC Android 4.3 Jelly Bean On Galaxy S3 GT-I9305
Download Odin v3.09 and CF-Auto-Root-m3-m3zh-gti9305.zip. (ဒီဖိုင်လ် နှစ်ခုလုံးကို ဒေါင်းယူပါ)
Extract CF-Root zip file that you downloaded earlier from above link, you will geta.tar.md5 file. (Desktop ပေါ်မှာ CF-Root Zip ဖိုင်လ်ကို ဖြည်ပါ .tar.md5 ဆိုတဲ့ ဖိုင်လ်လေးထွက်လာပါမယ်)
Extract Odin zip file and you will get Odin3 v3.09.exe along with few other files. (Odin zip ကိုဖြည်ထားပါ)
Power off your Android device. Wait 5-6 seconds for vibration to confirm complete switch off. (ဖုန်းကို Power ပိတ်လိုက်ပါ)
Now, put the Galaxy S3 GT-I9305 in Download Mode by pressing and holding down the Volume Down, Home and Power button together. A warning screen will come up; press Volume Up button to enter Download Mode. (Volume Down + Home + Power button တွေကို တပြိုင်ထဲနှိပ်ထားပြီး Download Mode ကို ဝင်ပါ)
Now run Odin3 v3.09.exe (see Step 3) as an Administrator because Admin privileges is required to complete the process smoothly (only applicable Windows Vista and higher). (Odi3.09.exe ကို Run လိုက်ပါ) (အဆင်မပြေရင် Run
as an Administrator နဲ့ Run ပါ)
Now connect your device to your PC using USB cable. An “Added!!” massage will appear in Odin’s message box. (ဖုန်းကို PC နဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ)
Click the AP Button, and select that CF-Auto-Root-m3-m3zh-gti9305.tar.md5 file that you get in Step 2.(AP ကို နှိပ်ပြီး စောစောက ဖြည်ထားတဲ့ .tar.md5 ဖိုင်လ်ကို ထည့်ပါ)
In Odin window, make sure only Auto Reboot and F. Reset Time checkboxes are selected. (Auto Reboot နဲ့ F. Reset Time ကို အမှန်ခြစ်ပါ)
Double check everything that we mentioned in Step 8 & Step9above. Now, once satisfied hit the START button to begin the flashing process.(Start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ)
Once flashing completed, your Galaxy S3 GT-I9305 will restart and soon you will seeaPASS message with green background in the left-most box at the very top of the Odin. You can now unplug the USB cable to disconnect your device from computer. (သူ့ဘာသာသူ အလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ် ပြီးရင် အလိုလို Reboot ကျသွားမှာပါ ပြန်တတ်လာရင် USB Cable က ဖြုတ်ပြီး ကြည့်လိုက်ပါ Root ဖြစ်သွားပါပြီ)
Congrats! You just rooted Samsung Galaxy S3 GT-I9305 running on I9305XXUEMKC Android 4.3 Jelly Bean firmware. (Root ဖြစ်မဖြစ် သိချင်ရင် “Root Checker” ကို Google PLAY store မှ ဒေါင်းယူ Install ပြီး စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်)။။
Root ရပြီဆိုရင် Android Version 4.3 အတွက် မြန်မာစာ နဲ့ မြန်မာစာ မမှန်တာမျိုးတွေကိုတော့ ကို Djjoe Man (MMF) ရေးထားတဲ့ ဒီ Font Changer လေးကိုဒေါင်းယူပါ.....
Android Version4xx နှင့်အထက် တွေမှာ မြန်မာစာ အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင် ဒီ ကိုကျော်စွာသွင် ရေးထားတဲ့ Smat Zawgyi ကို ဒေါင်းယူပြီး ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ် အထဲက .bat ဖိုင်လ်လေးကို Run ပေးလိုက်ပါ...။ ခဏနေရင် Restart ကျပြီး..မြန်မာစာကို မှန်ကန်စွာမြင်ရမှာပါ..။
Samsung Galaxy S3 GT-I9305 Android 4.3 Jelly Bean firmware မရှိသေးလို့ လိုချင်သူများကတော့ အောက်က Link တွေကတဆင့် ဒေါင်းယူနိုင်ကြပါတယ်...။
If Need Firmware Download:
အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.. Credit..by ဝင်းကမ္ဘာကျော် www.winkabarkyaw.net
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 1/07/2014 10:58:00 pm